Sawirro: Goobtii Uu Qaraxu Ka Dhacay | Sagal Radio Services
Qaraxyada oo ahaa labo ayaa mid ka mid ah ka dhacay agagaarka Koontaroolka banaanka Madaxtooyada, halka qaraxa kale uu ka dhacay meel baabuurta la dhigto oo ku taal banaanka Hotelka cusub ee Doorbin ex Baar Fiat ama KM-0.
Dabley hubeysan oo saarneyd gaari ayaa ka soo gudbay koontaroolka Sayidka, halkaasoo ay ku dileen askari ku jiray hubinta gaadiidka mara wadadaas, waxaana kaddib gaariga uu u soo dhaqaaqay wadada hormarta Taaladii Dhagaxtuur iyo Masaajidka Isbaheysiga, halkaasoo dabley hubeysan ay uga dageen.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Ilaalada Madaxtooyada ee ku sugnaa Koontaroolka dhanka Hotel SYL ayaa rasaas ku furay gaariga, kadibna qarxay, waxaana markii dambe is rasaaseyn ay ka bilaabatay inta u dhaxeysa Taalada Dhagaxtuur iyo dhabarka dambe ee Hotel Siyaad.
Dableyda hubeysan ayaa la sheegay in qorshahooda ahaa inay Madaxtooyada ka weeraraan dhanka Albaabka xiga Hotel SYL, inkastoo aanay u suura gelin oo iska caabin adag kala kulmeen Ilaaladii ku sugneyd.
Sidoo kale qarax labaad ee ka dhacay halka la dhigto Baabuurta ee Hotelka cusub ee Doorbin ayaa ahaa kan geystay khasaaraha ugu badan, waxaana ku dhintay illaa 18 ruux oo isugu jirtay Ilaalo Xildhibaano iyo dad wadada marayay oo ka yimid dhanka Xeebta Liido iyo Isbartiibada.
Dadka ku dhintay goobtaas ayaa waxaa ku jiray hooyo iyo caruurteeda oo ka ag dhowaa halka qaraxa ka dhacay nawaaxiga isgoyska Jubba.
Wasiirka Amniga Gudaha Maxamed Abuukar Islow ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in Ciidamada ammaanka ay fashiliyeen weeraro ay kooxo hubeysan soo qaadeen, xaalada gacanta lagu haayo.
Jawiga magaalada ayaa ka duwanaa sidii habeenadii la soo dhaafay aheyd, iyadoo dareen feejigan uu ka jiray, ciidamada ayaa lagu soo daadiyay wadooyinka, kuwaasoo gaadiidka ka celinayay meelaha qaar, halka kuwa kalena baaritaan ku sameynayay.
Qaraxyada mataanaha ee caawa ka dhacay Muqdisho ayaa ahaa kuwo horay Hey’addaha ammaanka uga digeen in magaalada ay ku jiraan baabuur qarax ay saaran yihiin, iyadoo ciidamada ay ka baadigoobayeen magaalada.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyada weeraradii caawa ka dhacay Muqdisho, kaasoo ku soo beegmay afar maalmood kaddib markii la magacaabay Taliyeyaasha Booliska iyo Nabadsugida, iyadoo xaalada amni ee magaalada ay wanaagsaneyd tan iyo bishii October ee sanadkii hore, xilligaasoo Al-Shabaab labo weerar oo qarax dad fara badan ku dhamaadeen ka geysteen Muqdisho.